Ugu yaraan 10 ku dhimatay weerar ka dhacay magaalada Buffalo ee Gobolka New York – WARSOOR
MARAYANKA – (WARSOOR) – Nin ku hubaysan qori ayaa Sabtida maanta ah xabbad ku furay dad ku jiray dukaan ku yaalla magaalada Buffalo, gobolka New York ee dalka Maraykanka. Ninka ayaa dilay ugu yaraan 10 qof, ka hor intii aan saldhigga loo xakayn, sida saraakiil ciidanka ka tirsani ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press.
Faahfaahinta tirada inta qof ee dukaankan oo lagu magacaabo Tops Friendly Market ku jirtay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ayaanan wali la haynin.
Dambi-baarayaasha ayaa aaminsan in ninka dilka geystay, laga yaabo, uu si toos ah weerarka u duubayey. Dambi-baarayaasha ayaa eegaya in qorshaha weerarkiisa uu baraha bulshada ku sii shaaciyey iyo in kale. Saraakiisha ayaa sheegay in baaristu ay marxaladihii u horeeyey ku jirto, ciidankuna aanu wali caddeyn karin wixii ninka weerarka ku riixay. Hase yeeshee, ay eegayaan in toogashadu ay dhinaca isirka la xiriirto.
Dukaanka ayaa ku yaalla xaafad ay dadka madowga ahi u badan yihiin, taas oo 5km ka fog faras magaalaha Buffalo. Goobaha ku wareegsan ayaa ah goobo la deggan yahay.